Samsung Tab S3 9.7" - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
Apple လည်းမသုံးချင်ဘူး ဒါပေမယ့် တန်းမြင့် Android Tablet တစ်လုံးကို ရုံးလုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အခြား ဘက်စုံသုံး ဖျော်ဖြေရေး စနစ်တစ်ခု အဖြစ်ပါသုံးချင်တယ်ဆိုရင် ဘာကိုရွေးရမလဲ.... ?
Android Version 7.0 (latest)
Super AMOLED Display ...
Surrounding Audio System
ဝါး..... ဒီလောက်ဆိုရင် အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီနော်....2017 April လမှာ Samsung က ထပ်မံမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ S series ဝင် Tablet တစ်လုံးပါ။ သူ့နာမည်ကတော့ Tab S3 တဲ့...(နည်းနည်းကြိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ S series တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဈေးတော့ နည်းနည်းပြင်းပါတယ်။) ဒါပေမယ့် စိတ်မပျက်သွားပါနဲ့ဦး တစ်ခါဝယ်ပြီးတစ်သက်သုံးရလောက်အောင်ကောင်းပါတယ်။(နည်းနည်းပိုသွားပြီ xD)Samsung ရဲ့ (S-series) ဝင် Tablet တွေဟာ အခြား Tablet တွေထက် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်တာဟာ သုံးဖူးသူအတော်များျများလက်ခံကြမှာပါ။ ရုပ်ထွက် ၊ Software Upgrade support ၊ Design ၊ Performance အစရှိတာတွေဟာ သူမတူအောင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ခဲ့လို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုအသစ်ထွက်တဲ့ Tab S3 မှာရော ဘာတွေဘယ်လိုကောင်းမွန်သလဲ ? စွမ်းဆောင်ရည်ကော ဘယ်လောက်ထိကောင်းမလဲ... တစ်ချက်လောက် လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ အထူးအဆန်းသဖွယ်မြင်တွေ့လိုက်ရတာကတော့ Audio စနစ်ပါ။ ထောင့်တစ်ထောင့်စီတိုင်းမှာ Speakers တွေကိုထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ အတွက်
သီချင်းနားထောင်တာ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ ဂိမ်းဆော့တာ အစရှိတဲ့ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေ အသုံးပြုတဲ့ အခါ ယခင်နဲ့မတူ တစ်မူထူးခြားတဲ့ အသံ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခံစားရမှာပါ။(AKG ရဲ့ဝါရင့်သဘာရင့် Sound engineers တွေနဲ့နည်းပညာပိုင်း ပူးပေါင်းဖန်တီးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်)
တစ်ကယ်ကို ဝမ်းသာစရာပါ ယခင် S series Tablet တွေတုန်းက S Pen မပါခဲ့လို့
သိပ်သဘောမကျခဲ့ပေမယ့် ယခုအခါမှာတော့ လုံးဝကို Top-End Android Tablet တစ်လုံးလိုပြည့်စုံစေခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာပါ။ S Pen လည်းပါတယ် Screen ကလည်း ကြီးတယ်ဆိုတော့ အပျော်တန်း ကာတွန်း တွေ ဒီဇိုင်းတွေကို Pro ကျကျ ဖန်တီးဖို့အခွင့်အရေးပိုများလာတယ်လေ။ S Pen ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က ဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်... သိချင်ဝယ်သုံးကြည့်ပါ xD
Tab S3 ရဲ့ ဒီဇိုင်းကတော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ iPhone7 ထက်တောင် ပိုပါးတယ်ဆိုပဲ။ ဒါ့အပြင် နောက်ကျောဘက်ဟာလည်း flat back design cover ဖြစ်ပြီး ထောင့်စွန်းများဟာလည်း Curved ဒီဇိုင်းအကွေးခုံးခုံးလေးတွေဖြစ်နေပါတယ်။အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင်တော့ iPad Pro 9.7 လက်မနဲ့ အရွယ်တူပြီး Design ပိုင်းမှာပိုမိုသာလွန်ကောင်းမွန်သလို ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့အခါမှာလည်း ပေါ့ပါးကျစ်လစ်တဲ့ ဇိမ်ရှယ် အရသာကြီးကို ခံစားနိုင်ဦးမယ်လို့ တွေ့မြင်နေရပါတယ် ။(လုံးဝ Premium Quality ပေါ့)
Super AMOLED Display ကို အသုံးပြုပေးထားပြီ ရုပ်ထွက် အနေနဲ့လည်း Full HD ကိုခံစားရမှာပါ။
Screen Size အနေနဲ့ 9.7 လက်မအကျယ်ရှိမှာဖြစ်ပြီး
Android OS အနေနဲ့ လက်ရှိ မှာ နောက်ဆုံး Version ဖြစ်တဲ့ Nougat (7.0) ကိုအသုံးပြုရမှာပါ။
RAM အနေနဲ့ 4GB ပမာဏ ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး internal storage အနေနဲ့ 32GB ပါဝင်သလို 256GB အထိလည်း ထပ်မံတိုးချဲ့အသုံးပြုလို့ရဦးမှာပါ။
Fingerprint စနစ်ကို ထုံးစံအတိုင်း ရှေ့ဘက် Home Button မှာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Battery ပမာဏ အနေနဲ့ 6000mAh ပါဝင်သလို Fast Charging စနစ်လည်းပါဝင်တာကြောင့်
အားခဏလေး ကုန်သွားတာတို့ အားတစ်ခါသွင်းရင် အကြာကြီးစောင့်ရတယ်တို့ဘာတို့ အစရှိတဲ့ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းပြီးသွားဖြစ်သွားမှာပါ။
ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အရောင်ကတော့ White(Silver),Black ဟူ၍ နှစ်မျိုးထုတ်လုပ်ထားပြီး
ကျွန်တော်တို့ လူကြီးမင်း ဖုန်းဆိုင်များမှာတော့ Silver Color ကို စတင်ဝယ်ယူနိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းကတော့ 918 000 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။(အစကတည်းက ဈေးနည်းနည်းပြင်းမယ်လို့ကြိုပြောထားတယ်နော် ? )
လုပ်ငန်းခွင် ဒါမှ မဟုတ် မိသားစု ဖျော်ဖြေရေးအတွက် ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ကိုယ်ရည် လွတ်လွတ် လပ်လပ်
အားပါးတရ အသုံးပြုချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ဈေးနှုန်းမှန်ကန် ပြီး #အရစ်ကျငွေချေစနစ်တွေနဲ့လည်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ လူကြီးမင်း ဖုန်းဆိုင်ကို အရောက်လှမ်းခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
More in this category: « Samsung C9 Pro Sony ရဲ့ ဂန္တဝင်မြောက် ဖုန်းတစ်လုံး (သို့မဟုတ်) Sony Xperia XA1 »